SAFIDINAY NO TAKIANAY – MyDago.com aime Madagascar
SAFIDINAY NO TAKIANAY
Ny takiantsika hoy ny Ct Rasoanoromalala Horace androany Alakamisy 09 janoary 2014 teny amin’ny Magro Behoririka dia ndao hamarinina avokoa ny bileta tokana nivoaka tamin’iny fiffidianana iny. Tsy mila dimy taona no anaovana izany fa amam-bolana. Ndao hoy izy hamarinina ny tao amin’ny disitrika iray ary rehefa vita izay dia esorintsika izay tsy izy. Raha mbola misy filoha hajain’ny vahoaka hoy izy dia sahy miatrika izany fa raha tsy izany dia hisy dimy taona vaovao indray. Henoy ny feon’ny vahoaka ary esory izay tsy izy. Tsy mitady na inona na inona ny vahoaka hoy Horace fa ilay safidiny no takiana, Ny Ct Randriamamiarizafy Ignace dia nanao antso avo ho an’ny filoha Ravalomanana sy ny dokotera Robinson, raha ny Sac, vondrona afrikana, sns hoy izy no andrasantsika hampihatra ny tondrozotra dia tsy hisy izany. Ny zavatr a tsotra dia ny fanokafana ny radio nakatona, ny famoahana ny gadra politika dia tsy mbola misy . Ny any Moramanga hoy izy dia ny radio Viva di amandeha amin’ny canal ny rnm ka tsy mandeha intsony izany rnm izany. Ataovy izay azo atao hodianao Andriamatoa filoha Ravalomanana fa izahao Ignace dia tsy mino ny Sadc. Miteny mahitsy aminao dokotera Robinson aho hoy izy fa raha izaho manoka dia tsy hanao fampitahana ny Ces, ary hilaza fa tsy misy lalàna manery anay anao izany. Ny Ct Hilarion dia nilaza fa mazava ny tenin’ny dokotera Robinson fa hijoro hatramin’ny farany izy. Momba ny fampiakarana grady ireo manamboninahitra dia nambarany fa na miakatra ny grady na ny diplaoma dia ny safimbahoaka tsy azo ahodikodina. Ny antsika hoy izy dia avoaka ny voka-pifidianana dia mandresy amin’ny 52,87 % ny dokotera Robinson. Hitafa amin’ny mpanao gazety iraisam-pirenena hoy Hilarion rahampitso ny filoha Ravalomanana, hamoaka ny marina. Taitra ny Sadc hoy izy naheno izany ary nilaza tamin’ny prezida fa ataovy tony aloha ny vahoakanao. Ny filoha Ravalomanana indrany hoy Hilarion namaly fa raha sy hanao an’io dia ajanony aloha ny fanisambato. Noho izany dia ny filoha Ravalomanana hanao izany rahampitso ary ny dokotera Robinson ho tonga eto amin’ny Magro ny Sabotsy, miankina amin’ireo no ataontsika eto. Misy ny feo mandeha hoy Hilarion fa misy fifanarahana any ho any. ajanony any izany hoy izy fa ny antony hanohana ny dokoetra dia tohanana amin’ny fifidianana filohampirenena izy ka hampody an’i dada. Miangavy antsika eto amin’ny Magro hoy izy hanajanonana izany resaka izany fa vao omlay no omany Robinson no niaraka tamin’ny delegasiona ary nilaza fa hiaro ny safidimbahoaka. Ny olona nihaona taminy dia ny ray amandreny ampanahy tsirairay fa tsy olon-kafa.
HILARION RARISON : MANGATAKA NY HANAFOANANA NY KANDIDAN ‘I HERY ISIKA
Auteur Solo Razafy*Publié le 9 janvier 2014 Catégories Politique
2 pensées sur “SAFIDINAY NO TAKIANAY”
Tsika mitady ny buletin tokana ambiny fa ny urnes mo zany aiza no mipetraka,sao dia everintsika fa any @QG J.L.R ary izy io no mipetraka ka tsy ho azony ovana malaky ao,ho atao ny cofrontation ny buletin fa manjary misy num de serie daolo ndray reo
Précédent Article précédent : MANDRESY DR ROBINSON, TSY MILA MIHAIKY RESY IZANY
Suivant Article suivant : HOSOKA AMIN’NY BILETA TOKANA : NANKAIZA NY BILETA TOKANA TSY NIASA ?